Posted by Tranquillus | Déc 17, 2020 | Shabakada
Dayactirka xirfadleyda ah: wareysi labo-sanole ah iyo dayactirka "alaabada" 6dii sanoba mar
2dii sanaba mar, mabda 'ahaan, waa inaad qaabishaa shaqaalahaaga (hadey kujiraan CDI, CDD, waqti-buuxa ama waqti-dhiman) oo qeyb ka ah wareysiga xirfadlaha ah. Joogtaynta ayaa la qiimeeyaa laga bilaabo taariikhda ilaa taariikhda, labadii sanaba mar.
Wareysigan sanadlaha ah wuxuu diirada saarayaa shaqaalaha iyo xirfaddiisa shaqo. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si wanaagsan uga taageerto iyaga rajadooda ku aaddan horumarinta xirfadeed (bedelka jagada, dallacsiinta, iwm.), Iyo inaad aqoonsatid baahiyahooda tababarka.
Wareysi xirfadeed ayaa sidoo kale la siiyaa shaqaalaha dib u bilaabaya howlahooda maqnaanshaha qaarkood: fasaxa hooyada, fasaxa waxbarashada waalidka (buuxa ama qeyb ahaan), fasax daryeel bixineed, fasax korsasho, fasax sabti, fasax dhaqdhaqaaq tabaruc ah oo sugan jirro dheer ama dhamaadka sharciga shaqada ururka shaqaalaha.
Dhamaadka 6 sano oo joogitaan ah, wareysigan wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la sameeyo tiro koob kooban oo ku saabsan mihnaddiisa shaqo ee shaqaalaha.
Heshiis shirkadeed ama, haddii taa la waayo, heshiiska laanta ayaa qeexi kara soo noqnoqoshada wareysiga xirfadeed iyo sidoo kale habab kale oo lagu qiimeeyo xirfadda mihnadeed.
Wareysi xirfadeed: dib u dhigista waa la oggol yahay
Shaqaalaha ka shaqeeya shirkadooda kahor ...
Xaq miyaan u leeyahay in aan dib u dhigo wareysiyada xirfadeed sanadka 2021 aniga oo aan la i ganaaxin? July 10th, 2021Tranquillus
READ Adeegso aaladaha suuqgeynta websaydhka si aad ganacsigaaga kor ugu qaaddo
horeKu dhiirrigelinta isboortiga goobta shaqada: ka-dhaafitaannada tabarucaadka bulshada ee uu qeexay sharciga maalgelinta Lambarka Bulshada ee 2021
socdaTemplate warqad: codso magdhowga kharashyada xirfadeed